कसरी हुन्छ गुण्डाराजको अन्त्य ? गणेश लामा कांग्रेसबाट र दिपक मनाङ्गे एमालेबाट चुनाव लड्दै « Himal Post | Online News Revolution
कसरी हुन्छ गुण्डाराजको अन्त्य ? गणेश लामा कांग्रेसबाट र दिपक मनाङ्गे एमालेबाट चुनाव लड्दै
प्रकाशित मिति : २०७४, ३० आश्विन १८:२४
काठमाण्डौ/३० ,असोज ।
नेपाल प्रहरीको केही उच्च अधिकारीहरुले नेपालमा गुण्डाराज सकिएको बताउँदै आएका छन् । तर बेलाबखतमा गुण्डाहरुकै मिलेमतोमा हत्या र अपराधका घटना घटिरहेका छन् । पछिल्लो पटक निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्या हुनुलाई पनि गुण्डाराजको प्रतिकको रुपमा कतिपयले लिएका छन् ।